टिकटकबाट बसेको माया प्रेमले होटेलमा बोलायो त्यसपछि …. – Online Khabar 24
इटहरी । युवतीमाथि क रणी पछि लु ट पा ट ग रे को आ रो प मा सुनसरी प्रहरीले १ पुरुषलाई पक्राउ गरेको छ ।
भिडियो शेयरिङ सोसियल नेटवर्क टिकटकबाट चिनजान भएकी युवतीलाई होटलमा बोलाइ ।यस्तो कार्य गरेपछि प्रहरीले कास्कीका पुरुषलाई इटहरीमा पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरीका अनुसार राजीवले टिकटकमार्फत चिनजान भएकी युवतीलाई भेट्न भनेर इटहरीस्थित होटलमा बोलाएका थिए । होटेलमा २ दिनसम्म युवतीमाथि क र णी ग रे र राजीवपी डि तयु वती कै ग र गहना र पैसा लिएरफ रार भएका प्रहरीको भनाइ छ ।
इटहरीकी युवतीमाथि यस्तो कार्य गरेर फरार भएका गुरुङलाई झापाकी महिला भेट्न जाँदै गर्दा इटहरीबाटै पक्राउ गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । इटहरीकी युवतीलाई ठ गी ग रेर गुरुङ सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै चिनजान भएकी झापाकी महिलालाई भेट्न आउँदै गर्दा इटहरीबाट पक्राउ परेका हुन् । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevकरिश्मा कपुरसँग विवाह नभएपछि अहिलेसम्म अविवाहित छन् अक्षय खन्ना ! कारण यस्तो
nextजम्मा २० रुपैयाँको लागि यी बालिका बाढी आएको नदीमा हामफालिन् (भिडियो सहित)